Wholesale Graphene kudziya chirafu Mugadziri uye Mutengesi | Sheerfond
Ichi chitsvuku chinopisa. Yayo Heating accessories ndeye graphene machira akagadzirwa nesherfond. Iwo ma graphene machira akavakirwa muchirafu. Iwo mabhatani akabatana neiyo graphene machira. Iwo mabhatani akanamwa ne silica gel. Iko kupisa basa kunogona kuvhurwa nekuvharwa nemabhatani, uye kupisa kwekudziya kunogona kugadziridzwa.
Ine homwe diki, isa simba kubhengi mairi, inogona kusimbisa iyo graphene jira.
Mumamiriro ekunze anotonhora, inogona kutipa kupisa, chigadzirwa chihombe, chinoshanda, iro jira rekudziya rinogona kuwacha uye rinogona kushambidzwa ka50.
Iwe unogona kugadzirisa iyo logo, gadzirisa iwo ruvara, uye gadzirisa maitiro.
Iwo mabhatani anozopenya kana ivo vari kushanda, uye iwe unogona kugadzirisa yako logo pane mabhatani kuti rako zita riwedzere kuoneka.
Zvese zvinhu zvinoshandisa zvakatipoteredza zvigadzirwa kuti zvigadzirwa zvive zvakachengeteka uye zvine hutano, zvinogadzira zvakatipoteredza.
Iyo yekuvandudza yemagetsi chigadzirwa inyowani yechigadzirwa mazano, novedades 2021.
Icho chipo chepamusoro, chipo chekusika kuna amai, baba kana shamwari, kana vatengi vako vadikani kana mafeni.
Zvigadzirwa zvedu zvepamutemo zvakagadzirirwa iwe, Tsika logo, kurongedza tsika.
Kana iwe uine zano rakanaka, ndokumbira utaure yedu R & D timu, ivo vanokupa iwe kukudziridza masevhisi, kugadzira zvigadzirwa zvakanaka kwauri, izvo zvinokushamisa iwe uye kuita vatengi vako kunyanya kufanana nayo. Ngatishandei pamwe uye titarisire nhau dzenyu
Isu tafekitori yemagetsi ine ISO 9001 certification, chitupa cheBSCI.
Muenzaniso Nha. YZ-02
Kukura kwechigadzirwa 1100mm * 150mm * 9mm
chigadzirwa uremu 200g
Pasuru kukura 305mm * 185 * 20mm
Pashure: Graphene kudziyisa ziso mask